Malunga nathi -Shanghai Huizhou Industrial Co., Ltd.
Eyasungulwa ngo-2011, kunye nenkunzi ebhalisiweyo yezigidi ezingama-30, iShanghai HuiZhou Industrial Co., Ltd. inikezelwe kumashishini ebandayo kwaye ibandakanyeka kwizinto ezinobushushu, ngokukodwa ukutya okutsha kunye neyeza. Sizimisele ukubonelela ngokutya kunye namayeza abathengi bethu abatsha ngezisombululo zokupakisha ezinobushushu ezilawulwa kukuhanjiswa ngenqanawa kubanda. Iimveliso zethu eziphambili ziipakethe yomkhenkce wejeli, ipakethe yenaliti yenaliti yamanzi, ipakethe yomkhenkce owomileyo, isitena somkhenkce, umkhenkce owomileyo, ibhegi yefoyile yealuminiyam, ibhegi eshushu, iibhokisi ezipholileyo, ibhokisi yebhokisi yokufaka, iibhokisi ze-EPS kunye nezinye izinto zokupakisha zekhenkethi ebandayo, njl.
Ikomkhulu le-Shanghai kunye nemizi-mveliso e-7 e-China
Huizhou Industrial office ibekwe e Shanghai, the metropolis of China (okwabizwa ngokuba Magic City kunye Paris of the East). Kwaye ngoku sineefektri ezisi-7 ezichaphazelwe kwiindawo ezahlukeneyo eTshayina ukuqinisekisa ukuba ngexesha nokususwa kwexesha lokuphakama.
Nelisa abathengi bethu iimveliso ezisemgangathweni kunye nenkonzo ebalaseleyo
Kuxhomekeke kuqoqosho oluphucukileyo lwaseShanghai kunye nelifa lemveli elinenkcubeko, iHuizhou Industrial ibone uphuhliso oluzinzileyo lweshishini ukusukela oko yasekwa ngonyaka ka-2011. Besisenza kwaye sizakuqhubeka ukubonelela abathengi bethu ngemveliso esemgangathweni kunye nenkonzo ebalaseleyo.
Imihlaba ephambili ifakiwe
Ukutya kunye noNyango ziiNkalo eziPhambili esizisebenzisileyo
Iimveliso zethu ezisetyenziswa kakhulu kushishino chain abandayo, ikakhulu refrigent kunye nokutya engumkhenkce kunye lobushushu kwikhemesti ezibuthathaka.
Chain Cold ubushushu-ulawulo ukuphakheja, Qinisekisa ubomi bakho umgangatho ongcono
Ukuba yinkokeli yehlabathi kupakisho olubandayo
Ukuhlonipha iNyaniso; Ukwenza inkqubela phambili; Ukufuna ezintsha; Ukusebenza ngokusebenzisana; Ukwabelana ngamava
Ejolise kubathengi, Xabisa uphuhliso oluzinzileyo
Ngo-2011, saqala njengenkampani encinci kakhulu, sivelisa ipakethe yomkhenkce wejeli kunye nezitena zomkhenkce.
Iofisi ibise-Yangjiazhuang vilage, kwiSithili seQingpu, kuPhakathi kweJiasong Road, eShanghai.
Ngo-2012, saqhubeka neshishini lethu linxulumene nezinto eziguqukayo ezinje ngejeli yomkhenkce, ukupakisha amanzi kumkhenkce kunye nezitena zomkhenkce.
Ke ofisi ibekwe kumgangatho wesibini nowesithathu., Kwi No. 488, Fengzhong Road.Qingpu District, Shanghai.
Ukwanelisa umthengi wethu kunye nokuhlangabezana neemfuno ezandayo, safudukela kumzi-mveliso omkhulu saza sazandisa iimveliso zethu, ezinje ngobushushu obubandayo bomkhenkce, iphedi yomkhenkce kunye nebhegi ye-aluminium foil, njl.
Iofisi ibekwe ku-Namba. 688 Songze Road, kwiSithili saseQingpu, eShanghai.
Ngo-2015, kwi-additon kwishishini lethu langaphambili, safudukela kwindawo enye enkulu nakwi-ofisi ukuze sibe nemveliso yeebhegi ezishisayo, sibumba ishishini lethu njengepakethe yefriji yomkhenkce kunye nebhegi ye-thermal .. , EShanghai.
Ngo-2019, ngophuhliso lwe-intanethi kunye nokutsala iitalente ezingakumbi, siya kumzi-mveliso omtsha ngokuhamba ngokulula kwaye sineofisi entsha kuloliwe ongaphantsi. Kwakulo nyaka mnye, saseka ezinye iifektri ezi-4 kwamanye amaphondo e-China.
I-ofisi ibekwe kumgangatho 11, Baolong Square, No.590, Huijin Road, Qingpu District, Shanghai.